Dagaal ay ku dhinteen 15 qof oo ka dhacay deegaan katirsan gobolka Mudug.
Thursday December 05, 2019 - 20:46:21 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Ku dhowaad 17 qof ayaa dhimatay tira kalane dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii dagaallo beeloodyo ay dib uga qarxeen deegaanno katirsan gobolka Mudug ee bartamaha dalka Soomaaliya.
Wararka ka imaanaya deegaanka Afbarwaaqo oo hoos taga degmada Jarriiban ayaa sheegaya in ugu yaraan 15 qof ay dhiteen tira kalane ay dhaawacyo soo gaareen.
Cabdullaahi Warsame Cawaale oo ah guddoomiye ku xigeenka gobolka Mudug ee dhanka maamulka 'Galmudug' ayaa warbaahinta u xaqiijiyay dhimashada 15-ka qof oo dhammaantood ahaa maleeshiyaadkii dagaallamayay.
Wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in maleeshiyo beeleedyada dagaallamay ay wali isku hor fadhiyaan deegaanka Afbarwaaqo, dagaallada u dhaxeeya beelaha walaalaha ah ee wada dega gobolka Mudug ayaa larumeysanyahay in ay gadaal ka hurinayaan maamullada Galmudug iyo Puntland.
Sanad walba dagaal beeleedyada ka dhaca gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya waxaa ku dhinta boqolaal qof waxaana muuqata in shacabka Soomaalida ay ka ma shquuleen iska caabinta gummeysataha dalka kusoo duulay ayna dhaxdooda isku mashquuleen.